Warbaahinta oo aan loo ogolaan doonin tabinta Kulanka Golaha Shacabka ee berri – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, ayaa maanta ka codsaday xildhibaannada in aysan hadda wixii ka dambeeya sameyn fowdo, sida uu hadalka u dhigay, si uusan u xumaan ama u istaagin Kulanka Golaha. Waxa uu sheegay in sababtii keentay inuu fashilmo Kulankii Golaha ee sabtidii hore la xaliyey.
Guddoomiye Mursal waxa uu sheegay in ay sameeyeen Guddi 5 Xubnood ka kooban oo, sida uu sheegay, u xilsaaran saxaafadda tabineysa Kulamada Golaha. Taas ayaa muujineysa inuu goluhu wax-ka-beddel ku sameeyey siduu ula macaamili jiray warbaahinta, waana natiijo ka dhalatay isku-mari-waagii Xildhibaannada ee kulankii Sabtidii hore ee ku qotomay iney Saxaafaddu hatabiso iyo ineysan tabin Kulanka Golaha ee looga doodayo amaanka dalka.
“(Guddigu) waxay go’aamiyeen in saxaafadda loo sameeyao aqoonsiyo, si loo kala aqoonsado Shaqaalaha Baarlamaanka iyo Saxaafadda” ayuu yiri Guddoomiye Mursal. Waxa uu sheegay in kulan, aan caadi ahayn, oo uu goluhu isugu imaan doono berri ay ku hor imaan doonaan Masuuliyiinta Laamaha Amniga. Laakiin, kulankaas saxaafadda loogama yeeri doono, sida uu Guddoomiyaha Golaha Shacabku sheegay.